Neymar Jr Oo Haddaba Ciyaartoyda Barcelona Wax Ka Waydiiyay Tababaraha Cusub Ee Quique Setién Iyo Jawaabtii La Siiyay. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Neymar Jr ayaa u muuqda mid haddaba ciyaartoyda kooxda Barcelona ka warsaday macalinka cusub ee Quique Setién kadib muddo kooban oo uu maamulayay Camp Nou.
Neymar Jr ayaa suuqii xagaagii la soo dhaafay wax walba u sameeyay sidii uu Barcelona ugu soo laaban lahaa Barcelona laakiin kooxdiisa PSG ayaa meel adag iska taagtay wada xaajoodkii fashilka ku dhamaaday.
Laakiin Neymar Jr ayay ka go’antahay sidii uu Barcelona ugu soo laaban lahaa wuxuuna haddaba ciyaartoyda Barcelona ka waraystay macalinka cusub ee Quique Setién oo dhawaan badalay Valverde oo shaqada laga caydhiyay.
Wargayska xogaha qarsoon soo bandhiga ee ‘El Confidencial’ ayaa shaaciyay in Neymar Jr uu la soo xidhiidhay hogaamiyaasha qolka labiska kooxda Barcelona si ay ugaga waramaan tababare Setien.
Waxaa warkan lagu sheegay in jawaabta la siiyay Neymar Jr ay gabi ahaanba ahayd mid fiican maadaama oo ay ciyaartoyda Barcelona ee muhiimka ahi ay ku faraxsan yihiin shaqada uu haddaba bilaabay Quique Setién.
Warka ayaa intaa raaciyay in ciyaartoyda Barcelona ay Neymar Jr u sheegeen in ay jeclaysteen hanaanka tababar ee Quique Setién kaas oo badalay xaaladii Valverde.
Warka wanaagsan ee uu Neymar Jr ka helay hogaamiyaasha qolka labiska Barcelona ee tababare Quique Setién ayaa sabab u noqon karta in suuqa xagaaga ee dhamaadka xili ciyaareedkan uu Camp Nou ku soo laaban doono.
Ciyaartoyda hogaamiyaasha qolka labiska ee Barcelona inkasta oo aan magacooda si gaar ah loo xusin waxaa ka mid ah Lionel Messi iyo Gerard Pique oo xidhiidh dhaw la leh Neymar Jr si la mid ah Luis Suarez.
Barcelona waxay suuqa ugu jirtaa gool dhaliye muhiim kooxdeeda ka noqon kara iyada oo Luis Suarez uu galay dhamaadka waayihiisa ciyaareed balse soo laabashada Neymar ayaa markale noqon doonta arin suuqa qabsan doonta.